S hanghai kuchenesa Textile Limited, sezvinoita kutungamirira uye nyanzvi hotera Textiles mugadziri kuEast China, isu pfungwa panyaya iyi kupfuura makore 15. Zvigadzirwa Our chikuru kusanganisira: hotera mubhedha linens, hotera matauro, hotera Amenities, F & B linens. We achakupaiwo wakakwana Textiles negadziriso mapoka hotel, vendege, rwendo zvikepe, zvipatara.
T hrough edu nevasori uye Distributors yose, zvino isu kugovera Textiles kuti nyika yakakurumbira mapoka akawanda hotera, akadai Intercontinental, Marriott, Hilton, Starwood, Hyatt, Shangri-la etc. We Export kunyika dzinopfuura 25.
O Ur okutengesa hofisi uye logistics basa dziri mu Chinese ano guta - Shanghai, uye yedu gadzira chawo muna Central China province. It kutitsigira pasi mutengo uye yakakwirira kunyatsoshanda basa.
M mhangura kupfuura makore 15 hotera wedzerai ruzivo, 10+ makore basa mutsa Whitehead Textile fekitari oparesheni, iyo ichapa iwe zvakanaka okutengesa basa, yakatsiga unhu uye zvemakwikwi mutengo. Tinotarisira kuti takunda zvisamumirira pamwe pose Distributors, vamiririri, mapoka hotera!